Imibuzo Evame Ukubuzwa - iGeneham Pharmaceutical Co., Ltd.
Kuyini ukukhishwa kwerosemary? Kuthiwani ngezakhi ze-antioxidative?
Lokhu kukhishwa kuvela ku-rosemary (Rosmarinus officinalis Linn.), Isitshalo esivamile sasekhaya esikhule e-Alps kusukela eNkathini Ephakathi, futhi manje sitholakala emhlabeni wonke. I-rosemary isetshenziswe izinkulungwane zeminyaka njengesinongo esimnandi, isilondolozi sokudla, kwizimonyo nemikhiqizo yezinwele, futhi njengomuthi wamakhambi ezinhlobonhlobo zezifo zempilo. Kuze kube manje, izindlela eziqondile zamakhemikhali ezibandakanyeka emiphumeleni yazo ezuzisayo zihlala zingaziwa.
I-Carnosic acid, i-Carnosol ne-Rosmarinic acid yizinhlanganisela ezisebenza kakhulu ze-rosemary extract ezitholakala zinomsebenzi onamandla we-antioxidant, kanti i-Carnosic acid ithathwa njengenye kuphela ye-antioxidant evimbela ama-radicals wamahhala ngokusebenzisa indlela ye-multilevel cascade.
"Ama-antioxidants emvelo awasebenzi kahle kunalawo okwenziwa?"
Imibiko eminingi ezincwadini kanye nasezifundweni zethu zangaphakathi iqinisekisa ukuthi empeleni i-rosemary antioxidants isezinsizeni eziningi ezisebenza kakhulu kune-vitamin E (yokwenziwa), i-BHA, i-BHT, i-TBHQ nezinye. Ngaphezu kwalokho, ama-antioxidants e-rosemary amelana nokushisa okuphezulu kakhulu, futhi ukusetshenziswa kwawo kwenza amakhasimende agcine ilebuli ehlanzekile emikhiqizweni yawo futhi akukho nkinga ye-allergen.
Kungani uthatha ukukhishwa kwe-rosemary?
Kunama-antioxidants amaningi amahle kakhulu angavikela umuntu ekulimaleni okukhulu kwamahhala. Kodwa-ke, ukukhishwa kwe-rosemary kuqukethe ama-antioxidants angaphezu kweshumi, futhi kusekela ukuvikelwa okunamandla ezifweni ezingalapheki, kufaka phakathi i-Alzheimer's, esinye sezifo ezesatshwa kakhulu namuhla.
• Inikeza ukuvikelwa okunamandla kokulwa ne-antioxidant
• Kuvikela amangqamuzana obuchopho emiphumeleni ejwayelekile yokuguga
• Kunganciphisa ukukhula kwesifo i-Alzheimer's
• Kuvikela amaseli kuma-carcinogens
• Misa ukukhula kwamangqamuzana omdlavuza
• Isiza ukuthoba izimpawu zokungezwani komzimba, ikakhulukazi nezibungu zothuli
• Thuthukisa amandla kavithamini E
• Gcina izinga lomfutho wegazi onempilo
• Izinga lokushisa eliqinile Antioxidant
Yini eyenza ukukhishwa kwe-rosemary kukhetheke kangaka?
Ama-antioxidants akhonjisiwe ukuthi anciphisa ama-radicals wamahhala, kepha akuwona wonke ama-antioxidants alinganayo. Ezimweni eziningi, uma i-antioxidant seyenze i-radical yamahhala ukuthi ingasasebenzi njenge-antioxidant ngoba iba yinhlanganisela ye-inert. Noma okubi kakhulu, iba yi-free radical uqobo.
Yilapho ukukhishwa kwe-rosemary kuhluke kakhulu. Inesikhathi eside sokuphila somsebenzi we-antioxidant. Akugcini lapho, iqukethe inqwaba yama-antioxidants, kufaka phakathi i-Carnosic acid, okuwukuphela kwama-antioxidants anciphisa ama-radicals wamahhala ngokusebenzisa indlela ye-multilevel cascade.
Ngabe i-Mulberry Leaf Extract 1-Deoxynojirimycin isebenza kanjani?
I-1-Deoxynojirimycin (DNJ) iwuhlobo lwe-alkaloid ekhona emaqabunga e-Mulberry kanye nezimpande. I-DNJ ivunyelwe ukuba nemiphumela yokugcina izinga le-glucose yegazi enempilo, umsebenzi we-Antiviral nokusiza ukwenza ngcono uketshezi kwesikhumba nokuhlanza isikhumba.
Ucwaningo lukhombisa ukuthi ngenkathi i-DNJ ingena emzimbeni, ithinta ngempumelelo imisebenzi yokuvimbela ukubola kwesitashi noshukela nge-sucrase, maltase, α-Glucosidase, α-amylase enzyme, ngaleyo ndlela inciphise kakhulu ukumuncwa koshukela womzimba, futhi igcine ushukela ube mkhulu esitebeleni ngaphandle kokushintsha kokudla. Ngaphezu kwalokho, i-DNJ ineqhaza ekususweni kwenqubo yokuguqulwa kweshukela ye-HIV ulwelwesi glycoprotein. Okwamanje, ukuqoqwa kwama-glycoprotein angavuthiwe kunganciphisa ukuhlangana kwamaseli nokubopha phakathi kwegciwane kanye ne-host cell receptor, nokwakhiwa kokuvumelana komzimba weseli ukuvimbela ukuphindaphindeka kwe-MoLV ukuze kuzuze umsebenzi we-cytostatic
Uyini umsebenzi we-Mulberry Leaf Extract 1-Deoxynojirimycin?
I-Mulberry Leaf ibhekwa njengomuthi omuhle eChina yasendulo yokulwa nokuvuvukala, ukusekela ukulwa nokuguga nokugcina impilo. Iqabunga le-Mulberry licebile ngama-amino acid, uvithamini C nama-antioxidants. Phakathi kwalezi zingxenye, okubaluleke kakhulu yiRutoside neDNJ (1-Deoxynojimycin), Ucwaningo lwakamuva lwaseChina lukhombise ukuthi iRutoside neDNJ ziyasebenza ekulawuleni amafutha egazi, ukulinganisa umfutho wegazi, ukunciphisa ushukela egazini, nokwandisa imetabolism.
Uyini umphumela we-Mulberry Leaf Extract 1-Deoxynojirimycin kumaphrofayili wegazi Lipid Kubantu?
Amaqabunga e-Mulberry acebile nge-1-deoxynojirimycin (DNJ), ebaluleke kakhulu ekugcineni izinga le-α-glucosidase enempilo. Phambilini sibonise ukuthi i-DNJ-rich mulberry leaf extract ikhiphe ukucindezela ukuphakama kwe-postprandial blood glucose ebantwini. Inhloso yalolu cwaningo kwakuwukuhlola imiphumela ye-DNJ-rich mulberry leaf extract kuma-plasma lipid profiles kubantu. Ilebuli evulekile, isifundo seqembu elilodwa senziwa ezifundweni eziyi-10 ezinamazinga okuqala we-serum triglyceride (TG) ≥200 mg / dl. Izihloko ezifakiwe amaphilisi aqukethe i-DNJ-rich mulberry leaf extract at 12 mg kathathu nsuku zonke ngaphambi kokudla amasonto ayi-12. Okutholakele kwethu kukhombise ukuthi izinga le-TG ku-serum lehliswe ngesizotha futhi iphrofayli ye-lipoprotein inoshintsho oluhle ekulandeleni ukuphathwa kwamaviki ayi-12 kwe-DNJ-rich mulberry leaf extract. Azikho izinguquko eziphawulekayo kumingcele ye-hematological noma ye-biochemical ebonwe ngesikhathi sokufunda; azikho izehlakalo ezimbi ezihlotshaniswa ne-DNJ-rich mulberry leaf extract.
Kuyini ukukhishwa kwembewu yeFenugreek?
Eyaziwa kangcono eNtshonalanga njengesinongo se-curry, i-Fenugreek isekela izinga eliphilile le-testosterone, inikeze izinzuzo eziqinisekisiwe ejimini - nasekamelweni lokulala. Iphinde ikhuthaze ukukhiqizwa kobisi kwabesifazane abahlengikazi futhi igcine isibindi siphilile.Imbewu yeFenugreek isetshenziswa kabanzi njengegalactagogue (i-ejenti ekhiqiza ubisi) ngomama abahlengikazi ukwenza ngcono ukutholakala kobisi lwebele. Ucwaningo lukhombisile ukuthi i-fenugreek iyisikhuthazi esinamandla sokukhiqizwa kobisi lwebele.I-Fenugreek ibuye isetshenziswe amakhulu eminyaka ukusiza ukugcina izinga elijwayelekile le-glucose nokulinganisa ukunikezwa koshukela wegazi. Isivivinyo somtholampilo sakamuva sikhombisile ukuthi i-Fenugreek ivuselela uketshezi lwe-insulin oluxhomeke ku-glucose ngamanyikwe. Izifundo beziziqinisekisile izakhiwo ze-hypoglycemic zezimbewu ze-Fenugreek greek, isb. Kungasiza ukugcina amazinga kashukela ajwayelekile, futhi kunomthelela ekwehliseni isisindo nasekulahlekelweni kwamafutha futhi. Imisebenzi yembewu yeFenugreek ikhishwa njengoba ingezansi:
• Lungisa umzimba
• Sekela ukukhulisa ukuqina kwabesilisa, ukushayela nokusebenza
• ukwandisa izinzuzo zokuzivocavoca umzimba
• Ukwenza ngcono ukukhiqizwa kobisi kwabesifazane abahlengikazi
• Thuthukisa umsebenzi we-pancreatic
• Gcina izinga le-glusoce enempilo
• Zuza empilweni yesibindi
Yini amaFurostanol saponins?
Ama-sapostinol we-Furostanol akhona ezitshalweni ze-fenugreek saponin, kuyasiza ukugcina ileveli ye-testesterone enhle ngokukhuthaza umzimba ukuthi ukhiqize i-luteinizing hormone ne-dehydroepiandrosterone.Iye yasetshenziselwa ukukhulisa amandla emvelo wamadoda, ukushayela, nokusebenza, nokwenza ngcono ukukhula kwemisipha Ucwaningo lwamanje lukhombisa ukuthi izingxenye zalo eziyinhloko, ama-saponin e-Furostanol, phambilini ayedayinin saponin, adlala indima enkulu esithako esisebenzayo.
Abasubathi be-Aerobics bathole ukuthi ngemuva kokuthatha ama-saponin we-fenugreek, isifiso sabo sokudla sesithuthukisiwe. Lokho kuthathwa njengento enhle kulabo bantu abafuna ukuzuza isisindo, ingasetshenziswa njengeMiscle Building Supplements.Ucwaningo lwangoJuni 2011 e-Australia Centre for Integrative Clinical and Molecular Medicine lwathola ukuthi amadoda aneminyaka engama-25 kuya kwengama-52 uthathe i-fenugreek ekhishwe kabili nsuku zonke amasonto ayisithupha athola ama-25% ngaphezulu kwizivivinyo ezikala amazinga we-libido kunalabo abathathe iPlacebo. Futhi, test. iphakanyiswe ngaphezulu kuka-20%.
I-4-hydroxyisoleucine iyi-amino acid engeyona amaprotheni, etholakala ezitshalweni ze-fenugreek, ikakhulukazi ezimbewini ze-fenugreek, ngomphumela wokuvuselela uketshezi lwe-insulin. Ngaphezu kwalokho, i-4-hydroxy-isoleucine ingaqinisa i-creatine engena kumaseli emisipha. Kungathuthukisa amandla emisipha nokuqina kwemisipha, futhi kwandise amandla nosayizi wamaseli emisipha.
"Yiziphi izinsizakalo ongazihlinzeka?"
Ukusungula ukubambisana kwesikhathi eside namakhasimende, ngaleyo ndlela sizokunikeza okuhle kakhulu Ngaphambi Kokuthengisa Nesevisi Yokuthengisa Ngemuva Kokuthengisa.
1. Inani elincane lamasampuli wamahhala;
2. Ukusekelwa okuqinile kwezobuchwepheshe okuvela esikhungweni sethu sefektri nocwaningo;
3. Phakamisa izixazululo ezifanele kuphrojekthi yakho.
4. Isethi ephelele yemininingwane yezobuchwepheshe, njenge-CoA, i-MoA, i-MSDS, i-Process Flow, imibiko yokuhlola, njll.
Kuthiwani nge-After-Sales Service?
1. Nikeza imininingwane yokuthunyelwa kwakho ngesikhathi;
2. Usizo ekuvunyweni kwamasiko;
3. Qinisekisa izimpahla ezingashintshi ezitholakele;
4. Perfect uhlelo kokulandela umkhiqizo kanye service;
5. Inkinga yekhwalithi yezimpahla ibhekene nathi